Ahopsan သစ်တော K K Kundo of the Rampant 2014 တွင်ပေါ်ထွက်လာ | ကိုရီးယား၏ဆိုးလ်
Posted by ကို Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | Hallyu ရုပ်ရှင်များအတွက်ခရီးသွား At ည့်ဆွဲဆောင် | 0
Ahopsan Forest, Gijang“ ၀ ါးပင်များ၏အိမ်” (아홉산숲)
နေရပ်လိပ်စာ: Ahopsan သစ်တောသည် ၃၇-၁၊ Midong-gil၊ Cheolma-myeon | တွင်တည်ရှိသည် Gijang-gun, Busan 37, တောင်ကိုရီးယား
သစ်တောများ၊ တောင်တန်းများနှင့်တောင်ကိုရီးယားလမ်းပေါ်လျှောက်လှမ်းလိုသည့်တောင်ကိုရီးယား၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားများသည်တောင်ကိုရီးယားရှိဒေသခံများနှင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်သစ်တောများကိုမြေပုံပေါ်တွင်တင်ထားသည်။ Ahopsan Forest, Gijang (아홉산숲) သည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်သစ်တောတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘုရင်ထာဝရဘုရင်theကရာဇ်သည်တောအုပ်၌ရိုက်ကူးနေသော်လည်းကျွန်ုပ်ရေးသားသောအဓိကရုပ်ရှင်မှာ Kundo: the Rampant of Age (ကိုးရီးယား: 군도: 민란의시대)
ရင်းမြစ် - Busan Dot Net သို့သွားပါ
သင်လက်မှတ်ခန်းသို့သွားပြီး Won ၅၀၀၀ ကိုပေးသည်။ သင်လက်မှတ်ပြခန်းကိုဖြတ်လျှောက်ပြီးတာနဲ့တောင်ကိုးတောင်ပေါ်မှာမင်းရဲ့ခရီးကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ လမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသည်။ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှတ်သားထားသည့်မြားများကိုလိုက်နာပါ။ လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်းသင်သည်အပင်အမျိုးမျိုးကိုမြင်လိမ့်မည်။ ဝါး၊ ထင်းရှူးပင်နီ၊ သပိတ်ပင်၊ ဟီနိုကီဆိုက်ပရက်စ်နှင့်အခြားအပင်များ။ Ahopsan သစ်တောအတွင်း၌သစ်ပင်အမျိုးအစားပေါင်း ၁၁၆ မျိုးရှိသည်။
Ahopsan သစ်တောအားအမှန်တကယ်ကျော်ကြားစေသည့်အရာမှာ ၀ ါးကျက်စားရာနေရာဖြစ်သည်။ Ahopsan သစ်တောအတွင်း၌ဝါးတောနှစ်ခုရှိသည်။ သင်သွားလာနိုင်သည့်ပထမဆုံးဝါးကျက်စားရာနေရာမှာ Majongjongjuk သစ်တောဖြစ်ပြီးဒုတိယဝါးတောသည်“ ဝါးပင်တန်းစီထားသည့်လမ်းကြောင်း” ဖြစ်သည်။ ၀ ါးကျက်စားရာနေရာ၏ဤအပိုင်းတွင်လမ်းကြောင်း၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ၀ ါးပင်များရှိသည်။
Ahopsan Forest ရှိလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုဖြတ်လျှောက်ရန် ၁ နာရီမှ ၂ နာရီခန့်ကြာလိမ့်မည်။ သင်ဓားတစ်ချောင်းယူပြီးသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူလိုက်ဖမ်းနေသည့်မြင်ကွင်းကိုပြန်ဖွင့်လျှင်ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ပို၍ မြန်သည်။ ဟားဟား။ ဓားမှာလက်မှတ်ပြခန်းမှာမပါပါဘူး။
တောင်ကိုရီးယား၏သဘောသဘာဝကိုအနီးကပ်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ သငျသညျ Busan ၌ရှိကြ၏သည့်အခါသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်၎င်း၏ကြောက်မက်ဘွယ်နေရာတစ်ခု။ အများပြည်သူသုံးကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခု၊ သင်မြို့မှလတ်ဆတ်သောလေကောင်းလေသန့်ကိုယူနိုင်ပြီးတောင်တက်ခြင်း၊ ပျော်ပွဲစားခြင်း၊ ဗွီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံအချို့ရိုက်ကူးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ မင်းလည်ပတ်ချိန်မှာ Ahopsan Forest ဟာဘာကြောင့်ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ရတာနှစ်သက်သလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်။
ရထား: Namcheon မြေအောက်ရထားဘူတာသို့သွားပြီး Line2ကို Suyeong ဘူတာသို့သွားပါ။ မက်ထရိုလိုင်း ၃ ကို Minam ဘူတာသို့သွားပါ။ Minam မှ Banyeo စိုက်ပျိုးရေးစျေးသို့ရထားလိုင်း ၄ ကိုသွားပါ။ Banyeo စိုက်ပျိုးရေးစျေးကွက်မှထွက်ခွာ။ တံခါးမှထွက်ရန်လမ်းလျှောက်ပါ။ ၂။ ဘတ်စ်ကားနံပါတ် ၁၈၄ ကိုစောင့်။ စီး။ Ungcheon (ride) တွင်ဆင်း။ ၆ မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ဤမြေအောက်ရထားဘူတာများအနီးတွင်နေထိုင်ပါကရထားလမ်းကိုလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိနောက်မှတ်တိုင်သို့သာသွားပါ။ မင်း Minam ဘူတာအနီးမှာနေမယ်ဆိုရင် Namcheon မြေအောက်ရထားဘူတာကိုမသွားနဲ့၊ Ahopsan Forest ကိုမသွားနဲ့။ ငါရှင်းပြဖို့မလိုအပ်ခဲ့ဘူး? ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိစ္စတွင်။ ဟားဟား။
Ahopsan သစ်တောအကြောင်း Busan
ဝင်ကြေး: 5,000 အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
ဖွင့်သည်: နံနက်9နာရီမှညနေ6နာရီ, တနင်္လာနေ့တိုင်းပိတ်သည်
တနင်္ဂနွေမနက် ၉ နာရီ - ညနေ ၆ နာရီ
အင်္ဂါနေ့မနက် ၉ နာရီ - ညနေ ၆ နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက် ၉ နာရီ - ညနေ ၆ နာရီ
ကြာသပတေးနေ့နံနက် ၉ နာရီ - ညနေ ၆ နာရီ
သောကြာနေ့မနက် ၉း၀၀ နာရီ
စနေနေ့နံနက် ၉ နာရီ - ညနေ ၆ နာရီ
+ 82 51-721-9183
ရင်းမြစ် - Google မြေပုံ
အုပ်စုလိုက်ခရီးသွား bus ည့်ဘတ်စ်ကားလည်ပတ်မှုအတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားရန်လိုသည်
တွန်းလှည်း၊ စက်ဘီး၊ တောင်တက်ကိရိယာများ (တုတ်များ) ကိုတားမြစ်သည်။
#AhopsanForest #Kundo ပျံ့နှံ့နေတဲ့ခေတ် #BambooForest
တောင်ကိုရီးယား၊ ဘူဆန်ရှိ Ahopsan သစ်တောပတ်လည်တွင်လမ်းလျှောက်
Kundo: Rampant of Age (군도: 민란의시대) ၂၀၁၄
English ရုပ်ရှင်ခေါင်းစဉ်ရုပ်ရှင်။ Kundo: ပျံ့နှံ့နေတဲ့ခေတ်
ul Hangul ဇာတိခေါင်းစဉ် - 군도: 군도시대시대
ဟာဂျာ 群盜: 群盜時代時代
roman ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော romanization: Gundo: Min-ran-eui Si-dae
une McCune-Reischauer: Kundo - Si-dae Min-ran-eui
အဖြစ်လည်းလူသိများသည် - Goondo, Archipalagao, Archipelago, သူခိုးများ Band 군도, Kundo: Minranui Shidae
ဒါရိုက်တာ Yoon Jong-Bin
Director လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Lee Il-Hyeong
စာရေးသူ - Jun Chul-Hong၊ Yoon Jong-Bin
ထုတ်လုပ်သူ - Yoon Jung-Hoon, Han Jae-Duk, Yoon Jong-Bin, Kang Hyun
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ - Choi Chan-Min
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ - ဇူလိုင်လ 23, 2014
လုပ်ဆောင်ချိန် - 137 မိနစ်
အမျိုးအစား - လှုပ်ရှားမှု / ကာလ - ၁၉ ရာစု / ဆုရရှိမှု
ဖြန့်ဖြူးသူ - Showbox
ရင်းမြစ် - အမေဇုံ
Kundo ၏အနှစ်ချုပ် - Rampant of Age (군도: 민란의시대) ၂၀၁၄
Kundo: Rampant of Age (Korean: 군도: 민란의시대; RR: Gundo: Min-ran-eui Si-dae) သည် ၂၀၁၄ တောင်ကိုရီးယား Joseon ကာလသရုပ်ဆောင်မင်းသား Ha Jung-woo နှင့် Gang Dong-won တို့ဖြစ်သည်။ Yoon Jong-bin ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကို ၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်း Joseon ကာလမှာရိုက်ကူးမှာဖြစ်တယ်။ ရုပ်ရှင်တွင်အဂတိလိုက်စားမှုကင်းမဲ့သောချမ်းသာကြွယ်ဝသောမှူးမတ်များနှင့်ချမ်းသာသောအကျင့်ပျက်အရာရှိများထံမှခိုးယူပြီးဆင်းရဲသားများအားငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများအကြားအာဏာရုန်းကန်မှုများအကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
ရင်းမြစ် - Youtube - Kundo - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်၏တရားဝင်ခေတ် (၂၀၁၄)
Joseon မင်းဆက်နှောင်းပိုင်းတွင်ကိုရီးယားတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နိုင်ထက်စီးနင်းပြုမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ အစာခေါင်းပါးခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းနှင့်သေခြင်းတို့သည်မျှော်လင့်ရမည့်ဘုံဖြစ်ရပ်မှန်များဖြစ်သည်။ မှူးမတ်များသည်သံလက်ဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးဆင်းရဲသားများကိုအမြတ်ထုတ်ကာသူတို့၏အကျိုးစီးပွားများကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့် Joseon မင်းဆက်ရှိအာဏာရလူတန်းစားကိုမိမိကိုယ်ကို Kundo ဟုခေါ်သောတရားမဝင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများသောမင်းသားများအကြားတွင်ကြောက်ရွံ့မှုများဖြစ်ပေါ်နေစဉ်သူတို့သည်ဆင်းရဲသားများအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်ဖြစ်သည်။ ဘုရင်ကသူတို့ကိုမတားဆီးနိုင်ဘူး။
၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏အဆင့်အတန်းနှင့်ဘဝကိုမှန်ကန်သောမိသားစုတွင်မွေးဖွားခြင်းအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတောင်အဲဒါကမှန်နေတုန်းပဲ။ Dolmuchi ကိုဆင်းရဲသားအသား၏မိသားစုတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးတရားမ ၀ င်သောကလေးများဖြစ်သော Jo Yoon အားအစွမ်းထက်။ ချမ်းသာသောမိသားစုတွင်မွေးဖွားသည်။ ထိုအမျိုးသားနှစ် ဦး သည်အန္တရာယ်ရှိသောမဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ခုကိုတွေ့ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် Dolmuchi သည်သူ၏မိခင်နှင့်အစ်မတို့နှစ် ဦး စလုံးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ဆင်းရဲသောမိသားစုမှကလေးတစ် ဦး အနေနှင့် Dolmuchi သည်သူ့အမေနှင့်အစ်မနှစ် ဦး စလုံးဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်ရန်မတတ်နိုင်ပါ။
ခွန်အားကြီး။ ချမ်းသာသောမိသားစုမှတရားမဝင်ကလေးတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းအမဲသတ်သူ၏သား Dolmuchi နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် Jo Yoon ၏သစ္စာဖောက်မှုကိုခံရ Dolmuchi ကို Kundo မှကယ်တင်ခဲ့ပြီး Kundo အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ သူသည်ကိုရီးယားကိုအုပ်ချုပ်သောအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ရက်စက်သောမင်းသားများဖြစ်သည့် Jo Yoon အားတိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူတို့သည်နောက်ဆုံးထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအတွက်တွေ့ဆုံကြသည်။ ဒါဟာအကျင့်ပျက်အစွမ်းထက်သူကြွယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆင်းရဲသောသူကိုအာဏာမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Kundo အဖွဲ့ဝင်များ - Rampant Age (၂၀၁၄)
Ha Jung Woo ပါ
Dol Moo Chi အဖြစ် Ha Jung Woo
•ပထမအမည် - Sung Hoon
•လူသိများသော: 김성훈; Ha Jeong Woo; Ha Jeong Wu; Kim Seong Hun; Ha Jeong U
နိုင်ငံသား - တောင်ကိုရီးယား
•လိင် - အမျိုးသား
မွေးဖွားခဲ့ပြီး - မတ်လ ၁၅ ရက်၊ ၁၉၇၀
•အသက် - ၄၆ နှစ်
Kang Dong Won သည် Jo Yoon ဖြစ်သည်
•ပထမအမည် - Dong Won
•မိသားစုနာမည် - ကန်
Gang Dong Won ဟုလည်းလူသိများသည်။
မွေးဖွားခဲ့သည် - ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၁၉၉၅
Lee Kyung Young သည် Ttaeng Choo ဖြစ်သည်
•နာမည် - Kyung Young
•မိသားစုနာမည် - လီ
Lee Kyeung Young၊ Lee Kyeong Yeong၊ Lee Geung Young စသည့်လူသိများသည်
မွေးဖွားသည် - ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၁၉၈၀
Ma Hyang အဖြစ် Yoon Ji Hye
•ပထမအမည် - ဂျီဟေး
•မိသားစုနာမည် - Yoon
Yun Ji Hye အဖြစ်လူသိများသည်
•လိင် - အမျိုးသမီး
Ma Dong Seok ပါ
Ma Dong Seok သည် Chun Bo ဖြစ်သည်
•ပထမအမည်: Dong Seok
•မိသားစုနာမည် - မ
Ma Dong Suk၊ Lee Dong Suk၊ Don Lee; 이동석; Lee Dong Seok ဟုလည်းလူသိများသည်
Lee Sung Min သည် Dae Ho အဖြစ်
•ပထမအမည် - Sung Min
Lee Seong Min ဟုလည်းလူသိများသည်
Kundo: ပျံ့နှံ့နေတဲ့အသေးအဖွဲခေတ်။ မင်းသိလား?
The 27 April April 2013 1 2013 XNUMX and and and and The ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
မင်းသား Ha Jung-Woo ၏ပထမဆုံးမြင်ကွင်းမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလ ၁၄ ရက်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ Jeollabuk-do၊ Saemankum ဒေသတွင်ဖြစ်သည်။
• Ha Jung-Woo ရုပ်ရှင်၏အခန်းကဏ္prepareကိုပြင်ဆင်ရန်သူ၏ခေါင်းကိုရိတ်လိုက်သည်။
မင်းသမီး Kim Min-Hee သည် Ma-Hyang တွင်သရုပ်ဆောင်ရန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော်လည်းကျောင်းထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မင်းသမီး Yoon Ji-Hye သည် Ma-Hyang အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
• ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ပြဇာတ်ရုံများ၌ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်သောနေ့၌ကြည့်ရှုသူ ၅၅၁,၈၅၀ ကျော်သည်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်₩ ၄.၀၈ ဘီလီယံ (သို့) ဒေါ်လာ ၃,၉၉၇,၀၀၀ ရရှိခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားတွင်ဖွင့်ပွဲနေ့တွင်တောင်ကိုရီးယား၌ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရုပ်ရှင်အတွက်အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာအားဖြင့်သတ်မှတ်မှတ်တမ်းများကိုချိုးဖောက် Transformers: အမွန်း၏အမှောင် (2011) ။ သို့သော် Kundo: Rampant ၏ခေတ် ရှစ်ရက်အကြာတွင်အခြားကိုးရီးယားရုပ်ရှင်သည်တောင်ကိုရီးယားတစ်ဝှမ်းရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ဖြန့်ချိသောအခါစံချိန်တင်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်၏အမည်လား ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး: ဟောက်ရေစီးကြောင်း။ ၃.၁ သန်းကျော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုသူများသည် ၅ ရက်ကြာကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်ရုံသို့သွားခဲ့သည်။
ဒီရုပ်ရှင်မှာလှုပ်ရှားမှု၊ အားကောင်းသောတောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်မှု၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတေးသံ၊ ပြင်းထန်သောကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းများ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင်ကွင်းများနှင့်လှပသောတန့်များရှိသည်။ ဤကဲ့သို့သောတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားမှနောက်ထပ်ဘာများမျှော်လင့်နိုင်သေးသနည်း။ ဒီရုပ်ရှင်ကစိတ်ပျက်စရာမကောင်းပါဘူး ဒါကိုသင်ကြည့်သင့်တယ်။
Kundo: Rampant Official Trailer of Age
Authentic နှင့်ဆွေးနွေးပါ။တောင်ကိုရီးယား၏ Youtube Youtube Channel"
လွန်ခဲ့သောကိုရီးယားရှိလျှပ်စစ်၊ ပလပ်၊ အပေါက်နှင့်ဗို့အား
နောက်တစ်ခုSinchon ကျောင်းပရဝုဏ် Yonsei တက္ကသိုလ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Sassy Girl (2001) တွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 3, 2021